3 Mfe Ụzọ Access iCloud t
1.Steps Iji Access iCloud.Com
2.Steps iji nweta iCloud site iCloud akara panel
3.Accessing iCloud ndabere na wondershare Dr.fone maka ios
iCloud bụ otu n'ime ihe ndị kasị Mmanu ígwé ojii ikpo okwu n'ihi na ya-enye gị na-echekwa gị faịlụ Central ọnọdụ na-enweghị chọrọ ohere na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye Apple njirimara, i ga-eme smart ojiji nke gị iCloud akaụntụ. Ọ bụrụ na ị dịtụ ọhụrụ ka iCloud, ebe a bụ ndu gị na-aghọta ndị dị iche iche n'ụzọ site nke ị nwere ike ịnweta iCloud.
Ezie na e nwere ihe ole na ole nche loopholes na Ịchekwa media faịlụ na nkọwa ndị ọzọ na gị iCloud akaụntụ, otu apụghị ileghara ojiji nke ọ nwere na-enye.
Nzọụkwụ Ka ịnweta iCloud.com
Mgbe ị na-achọ iji nweta gị iCloud akaụntụ, esonụ bụ ihe ndị dị mfe nzọụkwụ nke gị mkpa na-eso.
• Ị mkpa nbanye http://www.icloud.com/
• Ozugbo ị bụ n'ebe ahụ, na-eji gị iCloud nbanye nzere inweta ohere ka gị iCloud akaụntụ.
• Ọ bụrụ na a ọhụrụ ọrụ, ị nwere ike ike ọhụrụ id na paswọọdụ nanị site na itinye gị email na ịza ajụjụ ndị e depụtara.
• Mgbe i nwere nzere gị, itinye otu na iCloud website.
• Mgbe ị na-banyere, na i nwere ike na-ele gị zọpụta faịlụ na inyocha nkọwa.
• Cheta, e nweghị ụzọ ka ịnweta iCloud saịtị ahụ site na gị iPhone ma ọ bụ iPad. Ihe kpatara ya bụ na Apple mmepe hụrụ nnọọ dịghị mkpa na-enye iCloud saịtị dị ka niile ọdịnaya na gị iCloud akaụntụ na-ama ugbu na ngwaọrụ gị.
• Otú ọ dị, ị nwere ike họrọ ihe nchọgharị ka Chrome ma ọ bụ ọbụna Mercury na-ahọrọ na-ele desktọọpụ saịtị nke iCloud na-agbaso otu nzọụkwụ inweta ohere.
Nzọụkwụ iji nweta iCloud site iCloud Control Panel
Ọ bụrụ na ị na-achọ iji nweta gị iCloud akaụntụ na enyemaka nke akara panel, ị nwere ike ime nke ahụ ka mma.
• The nzọụkwụ mbụ bụ ibudata iCloud akara panel maka Windows.
• Ị nwere ike ịchọta njikọ na Apple si website onwe ya na ya-enye gị ka mmekọrịta ọdịnaya nke gị Apple ngwaọrụ na gị windows PC.
• Ị ga-kpaliri gị Apple id nzere na mkpa ka ị banye na ha.
• Ị ga-ahụ ndepụta nke dị iche iche ọrụ na faịlụ nke a ga-synced. Ị nwere ike ịhọrọ ndị nke ị chọrọ ka mmekọrịta gị na PC.
Ịnweta iCloud ndabere na wondershare Dr.fone maka ios
Ugbu a na ị na-ama maara nke ụzọ dị iche iche nke ịnweta gị iCloud akaụntụ, anyị ga-ugbu anya na mfe nzọụkwụ ka ịnweta iCloud ndabere. Otu n'ime ndị isi uru nke iCloud bụ na ọ na Akwadoo elu gị ọdịnaya nke ike-eji maka iweghachi na ikpe nke data ọnwụ.
Wondershare Dr. Fone maka iOS bụ ụwa mbụ iPhone na iPad data mgbake software. Ka anyị hụ otú ị nwere ike ịnweta iCloud na nkwado ma weghachite ngwaọrụ gị
• Mwepụta software na PC gị.
• Wondershare Dr. Fone maka iOS awade dị iche iche nke mgbake ụdịdị. Mkpa ka ị bulie 'naputa site na iCloud ndabere faịlụ'.
• Mgbe ị na-ahọrọ a nhọrọ, ị ga-ahụ ga kpaliri n'ihi gị iCloud akaụntụ nbanye nzere.
• Tinye nkọwa. Ị nwere ike obi ike banyere nchebe.
• Ozugbo ị na-ite na gị iCloud akaụntụ, ị ga-ahụ ahụ ndepụta nke dị iche iche iCloud ndabere faịlụ nke nọ na akaụntụ gị.
• Ị nwere ike ịhụ timestamp na-eji ndị nkọwa chọta nkwado ndabere na mpaghara nke ị chọrọ naghachi.
• Pịa na download bọtịnụ nke bụ ugbu n'akụkụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
• A ọhụrụ window ga-gbapụta nke ga-arịọ gị ịhọrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi.
• Họrọ naanị faịlụ gị mkpa n'ihi na ibu faịlụ, ihe ga-abụ download oge.
• Ozugbo i mere nhọrọ, see 'ọzọ' wee pịa na 'Doppler' button.
• Mgbe scanning a mere, ị ga-ahụ ndepụta nke data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
• Ị nwere ike ihuchalu data ma họrọ ndị ị chọrọ iji naghachi.
• See naghachi bọtịnụ ma zọpụta ha na chọrọ ebe.
Na ndị a, ị nwere ike mfe nweta gị iCloud ndabere faịlụ na ọbụna weghachi ehichapụ data dị ka mma.
Chefuru iCloud Paswọdu? Ihe na-eme iji nweta ya Back
Olee otú iji weghachite Photos si iCloud ndabere
> Resource> iCloud> 3 Mfe Ụzọ Access iCloud